UPaul Kagame: "Njengawo wonke amazwe, iRwanda yenza ubuhlakani" - JeuneAfrique.com - T mov RELAY
Accueil » UMNOTHO UPaul Kagame: "Njengawo wonke amazwe, iRwanda yenza ubuhlakani" - JeuneAfrique.com
Ngabe uhulumeni waseKigali ubutholile ubuchwepheshe kwa-Israyeli kubantu baseRwanda abangama-wiretap abahlala phesheya nge-WhatsApp? Phambi kwabezindaba kuzwelonke nakwamanye amazwe, uMongameli Paul Kagame waphonsela inselelo imininingwane ye "Financial Times".
"Njengawo wonke amazwe, iRwanda yenza ubuhlakani," kuvikela inhloko yezwe yaseRwanda esithangamini nabezindaba eKigali, ngenkathi ithi "ayinazo izindlela zokuthola ubuchwepheshe obunjalo. , kubiza kakhulu, "futhi lokho akuyona into eza kuqala kuye.
Ubuchwepheshe okukhulunywa ngabo i-software yakwa-Israyeli i-Pegasus, eklanywe yiqembu le-NSO, ekuvumela ukuthi ubeke ucingo, kodwa futhi uvule imakrofoni yakho noma uvule ikhamera yakho. Kusukela inhlolovo yamaNgisi nsuku zonke Financial Times, Abantu baseRwanda abahlala phesheya bebezoba yizisulu zalolu hlelo olwalungatheleleka ngocingo lwabo ngemiyalezo ethunyelwe nge-WhatsApp. "Wonke amazwe aqapha ukuxhumana kwezingcingo," kusho uPaul Kagame. Akukho okusha ngakho-ke, kumongameli waseRwanda, oqinisekisa ukuzazi kahle izitha zakhe, "abakwenzayo nokuthi bakuphi".
Ngikhathazeke kakhulu nabantu abahola izisulu ezivela eKinigi
Phakathi kwamagama ezakhamizi zaseRwanda ezifakiwe kwinhlolokhono ye Financial Times, lowo kaPlacide Kayumba, oyilungu le-United Democratic Forces (FDU-Inkingi), ohlala eBelgium, noFaustin Rukondo, ukhokho weRwanda National Congress (RNC), odingisiwe eNgilandi. "Kungaba yini ukusebenzisa imali eningi kubantu abangenandaba? Akuwenzi mqondo, ”kusho inhloko yezwe yaseRwanda. Ngaphambi kokuthi wengeze: "Ngikhathazekile kakhulu nabantu abahola izisulu ezivela eKinigi". Inkomba yokuthi ukuhlaselwa kweDemocratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) kuleli dolobha lezokuvakasha enyakatho yezwe, emngceleni ne-Uganda kanye neDemocratic Republic of Congo (DRC), okubangele izisulu ze14 ngo-Okthoba 5 owedlule.
"Yazi izitha zakho"
KuPaul Kagame, iRwanda "njalo yenza ubuhlakani, kusasebenza nanamuhla, yindlela onke amazwe asebenza ngayo." Ngokusho kweNhloko Yezwe, kuyindlela “yokwazi izitha zakhe nalabo ababasekelayo”. Ngakolunye uhlangothi, akazange anikeze imininingwane eminingi nge-modus operandi yezinsizakalo zobunhloli baseRwanda, ngaphandle kokuthi zisekelwe kuqala "kunobuhlakani babantu".
OLUNYE UQOQO OLUNXULWE kulengqungquthela yabezindaba ukusungulwa kwebutho elihlangene lamazwe alesi sifatshana esizothunyelwa maduze empumalanga ye-DRC ukulwa namaqembu ahlomile lapho. UPaul Kagame ukuqinisekisile ukuthi izingxoxo phakathi kwabasebenzi abahlukahlukene abathintekayo ziyaqhubeka, nokubamba iqhaza kweNhlangano Yezizwe. "Amanye amazwe avuma ukuqhubekela phambili, kanti amanye noma amabili amanye ayabaza, ngezizathu zawo," kusho inhloko yezwe. Uma isivumelwano singatholakali, sizimisele ukusebenza ngqo namazwe afisayo. Kepha akazange afise okuningiliziwe ukuthi yimiphi imisebenzi engenziwa ekuqhubeni kwaseCongo, nokuthi amasosha aseRwanda angabandakanyeka ngaphansi kwalesi sivumelwano.
I-African Soccer Confederation ifuna ukuphula inkontileka yayo neLagardère - JeuneAfrique.com